YƐbƆ mmƆden sƐ yƐbƐma mmofra a Ɛtesaa no ani b3ba wƆn ho so wƆ Katalan sukuu ahorow mu de Yɛ susudua ma mmofra a ƐwƆ apueimantam Koforidua Ghana mu nso.
YƐtrƐw Ghana amammereƐ wƆ sukuu mu anansesƐm kwan so, dwomto ne nnipakuw no amane ne amammereƐ nhyiamu ahorow mu.
YƐma nkyirimma tease sƐ; Abibirem nnyƐ bƆƆlaso a yƐb3tow nneƐma funu agu wƆn so
YƐkyerƐkyerƐ nnipakuw, akuw ahorow, temanmufo, ne nnwumakuw ma wohu Koforidua mmofra astena mu ankasa.
ƐDEN NA YƐYƐ WƆ GHANA?
(MMOA NE ASENSƆ A YƐDE MA BI NE SƐ)
Y3hwehwƐ sƐ yƐbƐ nya abusua ahorow yi ho nsƐm bi a ƐbƐboa yen dwumadi no.
Nea edikan ne sƐ; yƐbƐkyerƐkyerƐ abusuafo yi ama wƆahu sƐ Agyankabea nnyƐ mmofra yi kyƐfa. Ne saa nti na yƐboa mmofra yi ma wƆtena abusuafo yi nkyen.
YƐboaboa mmofra yi ano dinkyerƐw kwan so.
Ne saa nti, nea edikan a yƐhwƐ bre a mmofra yi ahu abusuafo akyikwan ne sƐ, yƐhwƐ sƐ abofrako no din wƆ yƐn nwoma mu na ƆsƐ fata sƐ yƐyƐ no moa ansa. SƐ anyƐ saa a, saa abofra no nni akwannya sƐ y3boa no.
YƐboa mmofra yi sukuukƆ mu ma wonya nimdeƐa wƆde bƐbƆ wƆn bra.
Afei yawie no, y3bƆ mmƆden sƐ abofra biara benya sukuu pa bi akƆ wƆ ne mpƆtam. Eyi nti biribiara a ƐsƐs Ɛwotua te Sɛ; tow ahorow, nneƐma a wƆbehia wƆ sukuu hƆ, sukuun taade, nnuan ne ahyentuade ne nea ƐkƐka ho ma abrabo mu yƐ mmerƐw ma w)n, sƐ ƐbƐyƐ na yƐbƐtu Agyankabea ntetewee ase korakora mmofra yi daakye nti.
Afei yƐboa mmofra nkumaa koraa a wƆwom ma wonya nsano nwuma.
Abofra biara a Ɔbewie sukuu na ƆpƐsƐ osua adwuma no nso, yƐboa no tu ne tinsa ma osuaa dwuma ko no. SƐnea ƐbƐyƐ na wƆbƐ tena wƆn man mu na wonnya adwen sƐ wƆbetukwan mpo na abrabo ay3 mmerƐw ama wƆn.
YƐsan ma mmofra yi apƆwmuden nsiakyibaa
Mmofra yi ayarehwƐ nso, yƐboa ma wƆn nsiakyibaa san tua wƆn ayarehwƐ mu ka.
Asetena mu no, yƐpƐ dabea nso ma wƆn.
S3nea ƐbƐyƐ na mmofra yi ani bƐka asetena mu no, yƐ ma wƆn mpa papa ne ntomtom nan a yƐahyƐ no aduru wƆn nnae mu, apƆwmuden kwan so.
Nea wobedi nso, yƐsƆ wƆn asen.
Nea mmofra yi bedi wƆ sukuu mu akyi no, nnuan kakra a yƐbetumi anya no, yƐhyehyƐ kyekyƐ ma abusua nkae no sƐ ƐbƐyƐ na wƆn nso benya asetena mu anigye.
Wowie sukuu nso a, yƐ san ma binom nso ntetewee wƆ yƐn adepam sukuu mu nso.
Mmusua ahorow nkae no nso, yƐwƆ mmoa nketenkete a yƐde ma wƆn ama woatumi atena wƆn ho so, ahwƐ wƆn ho ne abusua nkae no. Eyi nti ne yƐn adepam nteteweebea no.
YƐtƆn Ghana ammamere nso ma afoforo yƐn dwumadi ahorow nyinaa mu.
Ammammere kwan so no, yƐbƆ mmƆdƐn sƐ kwan biara so no, mmofra yi anibeggye aggye atom sƐ ampa wƆyƐ Ghanafo ne Ɔmanbapa. YƐkyerƐkyerƐ mmofra yi akwantu mu nsƐm ne hia a hia sƐ wƆtena wƆn man mu bƆ bra.
Les nostres directores ghaneses de GhanABC a Ghana ens ajuden a trobar la família i després fan un seguiment acurat i individualitzat de les famílies que han decidit retrobar-se i viure amb els seus fills. D’altra banda, també efectuem un seguiment acurat dels infants i joves a l’escola per tal d’assegurar una correcta adaptació i evolució acadèmica i evitar que abandonin els estudis.
No podem saber la quantitat real de casos de Covid a Ghana. Els oficials són només els diagnosticats amb testos i pel que fa a les morts només queden comptabilitzades les dels casos que han pogut ser atesos en hospitals. A 19 /07/2020 hi ha 27060 casos diagnosticats. L’associació ha posat en marxa dos projectes al respecte: Distribució de lots de menjar i productes sanitaris a les famílies i Equipaments a les escoles de kits de desinfecció de mans
Escola taller de costura
Anigyes3m koraa ne s3 Ababaa Rebecca a Ɔy3 wƆn mu pinyin asua adepam, apƆn ne ho a biribiara da hƆ sƐ Ɔno nso bƐkyerƐ ne nnuanom nketewa a aka ama wƆn nso ayƐ te sƐ Ɔno. YƐ reda no adi sƐ yƐn nneƐma mpo a yeapempam a yƐretƆn no saabre yi nyinaa y3 nensa ano adwuma. YƐbƐ san nso de ne ayƐbenya afim nyinaa ahyƐ sukuu no mu. Me ne worekasa yi yƐ wƆ dankora asaase baako. Afei nneƐma a wƆde befi sukuu no ase nyinaa nso wƆhƆdedaw. Na mmom Ankorakora, Nnwumakuw, Aban ne obiara a ƆpƐsƐ Ɔne yƐn di dwuma no; Pem ha
ƐnnyƐ wƆn a wƆne yƐn di nsawƆso yi na ƐbƐkyerƐ mmofra yi ade, na mmom, wƆn de wƆwƆ hƆ sƐ wƆbƐ boa akyerƐkyerƐfo a yeapaw wƆn Ɔmanyi mu no dwumadi ama akƆ nkan.
YƐhwƐ ma yƐaniku mmofra yi sukuu dwumadi ahorow ho yiye.
Afei yƐboa ma mmofra yi san nya ƆdƆ ne anigye ma wƆn ammamere bi tesƐ; Agoru, AnansesƐm ne wƆn ankasa kurom dwom ho.
Ne saa nti yƐboa mmofra yi ma wƆde wƆn nsa yƐn neƐma
WƆyƐ oyikyerƐ da Ghana nnwuma ahorow, asaw ahorow ne wƆn ankasa dwom adi.
Sukuudan foforo a yƐresi no mu nso, yƐde Akenkanbea ahyƐm sƐ nea ƐbƐboa mmofra no akenkan nnwumadi ahorow mu.
Saa kwan yi beboa yƐn ama yƐne mmofra yi aka abom adi agoru ahorow wƆ Ghana na yƐn so akyerƐ wƆn agoru ahorow bi nso a ƐwƆ Katalona.( bi tesƐ; “Steal the Flingstick”, “Hopscotch”, Granny’s Footsteps”. Ne nea Ɛkeka ho).